Maqaallo | December 2019
In St. Petersburg, kasbatay "Smart Farm"
Maanta, December 5, 2018, bandhigga gaarka ah ee "Smart Farm" ayaa ka bilaabay xarunta bandhigga Expoforum, oo hubaal ah inay danaynayso dad badan oo ka mid ah dhinacyada kala duwan ee agagaarka agagaarka warshadaha ee Ruushka iyo kuwa ku dhow dhow. Sida ay sheegeen qabanqaabiyayaashu, qayb ka mid ah bandhigga, martida waxay awood u yeelan doonaan inay bartaan guulaha horumarinta caalamka ee beeraha qalabka beeraha, calaamad u ah noocyada cusub ee cawska, fiiri guulaha wax soo saarka xoolaha ah ee digaaga iyo lo'da.
Diiwaanada wax soo saarka hilib geedka xayawaanka ah ayaa lagu dejiyey Arctic
Xoolaha xayawaanka ah ee lo'da ayaa laga soo ururiyey qiyaastii 1000 tan oo xabsi ah bishii. Sida laga soo xigtay xogta qaybta Yamalo-Nenets ee qaybta agaasinka warshadaha, ganacsiga iyo cuntada, laga bilaabo dhammaadkii Oktoobar ilaa bilowgii December 2018, qiyaastii 27 kun oo xayawaan ayaa loo wareejiyay si loo gowraco. Sida laga soo xigtay war-saxaafadeedka shirkadda "Myasoprodukty", ee xilliga qaboobaha xilliga dayrta-qaboobaha ee 2018-2019, waxay qorshaynayaan in ay iibsadaan meel u dhow 990 oo hilib geel ah.
Roobabka Caanaha: Dawladda Jamhuuriyadda Kazakhstan waxay qorsheyneysaa in ay furto in ka badan 500 oo beereyaal ah 2027
Ka dib markii la ansixiyay Wasaaradda Beeraha, 2027, waxay qorsheynayaan in ay kor u qaadaan soosaarka caanaha, furitaanka beeraha intooda badan. Sida laga soo xigtay Wasiir Ku-xigeenka Beeraha Arman Evniev, sannadkan ilaa 15 beer-beereed ayaa mar hore soo saaraya. Sidoo kale, sida Evniyev notes, oo keliya sabab u ah kobcinta beeraha caanaha loo habeeyay, gobolkaasi wuxuu helayaa waxyaalo badan oo caano ah.
"World Wide Web Cows": Bashkir "Burenok" ayaa hadda la diiwaangeliyey iyada oo isticmaalaysa casriga ah
Shaqada aqoonsiga lo'da iyo lo'da kale waxay ku socotaa nidaamka macluumaadka Ruushka ee Regagro. Sida laga soo xigtay wargeyska Wasaaradda Beeraha ee Ruushka, qiyaastii 90% xayawaanka ayaa hore loo geliyay xogta. Sida laga soo xigtay madaxa caafimaadka xoolaha ee gobolka Sterlitamak ee Jamhuuriyadda Bashkortostan, Ilgiz Nasibullin, in ka badan 19 kun oo loore, in ka badan 12 kun oo ido ah iyo ku dhawaad ​​600 faras ayaa laga diiwaan geliyey degmada.
Garsoor Golden: ee Ukraine, dabocase ayaa kor u kacay si ay u sareeyaan
Sida laga soo xigtay war-murtiyeedka Ururka Miro-dhirta Yukhiiska (UPOA), shirkadaha isgaarsiinta iyo silsiladaha dukaamada ayaa horeyba dhibaato u qaba iibsashada sheygan. Sababtoo ah hoos u dhac ku yimaada soo bixinta xididdo, waxaa jira horeba baahi weyn oo loogu talagalay. Toddobaadkii la soo dhaafay, qiimaha dalaggu wuxuu kor u kacay 50% oo hadda, gobolkana, waxay u dhexeysaa min 5 illaa 7 UAH halkii kg, qiyaasahii hore ee toddobaadkii ugu dambeeyay - 4 UAH.
Hilibka dabiiciga ah ee xal u ah dhibaatooyinka bay'ada iyo anshaxa: Hilib shinni ah oo laga keeno Maraykanka ayaa dhowaan galaya suuqyada Yurub
Shirkadda New Age Meats (USA) waxay soo saartay hilibka doofaarka ee unugyada stem iyo bacriminta. Macluumaadka khayraadka Agrarna-pravda, hilib-macaan ayaa buuxin doona maraakiibta yurubiyanka Yurub waxayna ka jabnaan doontaa lidiga dabiiciga ah. Hilibka dabiiciga ah, wuxuu u adeegi doonaa sida ugu wanaagsan ee loo cuno cunto cunidda loo cuno hilibka iyo kuwa kale ee dadka, sababo anshax ama anshax, ma cuni karaan hilibka xoolaha dhintay.
Qeybta Caspian "Alam" waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay midka ugu qaalisan adduunka
Beluga albino, oo ku nool Badda Caspian, ayaa dunida siinaysay kharashka ugu qaalisan. Alaabta ayaa la siiyay magaca sare iyo kan sare - "Almas", oo ku qoran luqada Ruushka "diamond". Tani waxay leedahay midab dahabi ah oo dahabi ah. Sida laga soo xigtay goobjoogayaal, caviar wuxuu u egyahay sida duxda yar ee laamo ka samaysan dahab dhab ah.
"Avocados ma shaqeyn doonto!": Ma aysan u oggolaanin inay ka soo baxaan miro khafiif ah oo ka soo jeeda Poland si ay u iibiyaan dukaamada Ukraine
Iyadoo adeegga warfaafinta ee Isticmaalka Ammaanka ee dalka Ukraine uu sheegay, in dufcadda avocados ee koray ee Israel iyo laga soo dhoofiyo Poland si Ukraine u soo jeestay in ay la qaadsiiyo duun khudradeed Mediterranean. Marka la sameynayo kormeerka xayawaanka ee Zapadny ee gobolka gobolka Lviv, miro la soo gudbiyey ayaa la qabtay, iyo cabasho ku saabsan xadgudubka tayada uur-ku-jirta iyada oo waafaqsan shuruudaha loo direy adeegga macaamiisha Polish.
Ka dib markii la ansaxiyay Gismeteo.ru, oo ay ugu wacan tahay isbedelka cimilada ee Moscow, miro caan ah ayaa bilaabay inuu halsano, oo laga qaado alkahooska sonkorta. Shimbiraha, oo aan awoodin inay u adkeystaan ​​sida "dharbaaxa" beerka, waxay bilaabaan inay si dhakhso ah u sakhraamaan. Dhibaatada khamriga ee la mid ah, hoyga guurka Ornitoria, oo ku yaal Sokolniki, ayaa hadda la dagaallamaya.
"Maalmaha Isbuucaanta Caanaha". Australiyaanku waxay ku doodaan in jadwalka taariikhda la soo saari karo oo keliya shukulaatada.
Abuurayaasha jadwalka taariikhiga ah, walaalahy Maria Kruse iyo Angela Seberano, waxay go'aansadeen in ay abuuraan hadiyado cusbo leh kuwa aan jeclayn shukulaatada oo aan iskudhin karin iliga macaan. Jadwalka jadeecadu wuxuu leeyahay jiis yar oo maalin walba ah oo loogu talagalay munaasabad gaar ah (badanaa jadwalahan oo kale ayaa la sii daayaa ka hor Christmas).
"Sharciyo ciriiriga". Dalka Ukraine, sharciga ah ee geedka la iibsaday hadda waxaa lagu hubin karaa codsiga mobile.
Shirkadda Gobolka "Xarunta Macdanta ee Cusub iyo Xarun Falanqaynta" waxay soo saartay codsi loogu talagalay Android yalynka.info. Barnaamijkani wuxuu kaa caawinayaa inaad doorato diiwaan gashan, laguu oggol yahay inaad gasho geed, taas oo loogu talagalay isticmaalka aadanaha. Si aad u ogaato geedkii geedka, meesha laga jarayo iyo koraya, iyo sidoo kale shahaadada leshoz halkaas oo geedka koray, kaliya soo rog codsiga horay looga heli karaa Google Play.
"Daacadnimo leh dhadhanka caarye": cabitaannada saddexda-cabitaan ee kookaha ah ee la heley ayaa laga helaa boqoshaada caaryada
Khubarada "Altai Veterinary Radiological Laboratory" ayaa lagu ogaaday cabitaannada qaxwaha sida "sadexda hal" ee ka sarreeya heerka fangaska caaga ah iyo caaryar, oo kaddibna keeni kara cudurro halis ah. Sida laga soo xigtay shaybaarka, cayayaanka iyo wakiillada kale ee infekshanka fungal ayaa khatar u ah bani-aadmiga, sababtoo ah waxay sababi karaan waxyeelo xagga caafimaadka ah.
Breeder ka Transcarpathia waxay keentay noocyo kala duwan oo ah kiwi-is-qabow u adkaysta
Ninka reer Uzhgorod, khabiirka beeraha iyo ganacsade, Heinrich Straton, ayaa soo saaray noocyo kala duwan oo ah kiwi ah "Karpat Straton Valentine", kaas oo u adkeysan kara dhaxanta Ukraine. Ku saabsan tan, dhirta ayaa ku sharraxan boggiisa Facebook. Marka laga eego cilmibaarista naas-nuujinta, kiwi waxay ku sii wadi kartaa noloshooda heerkul ah -22 ° C, waxayna bilaabaan inay koraan oo ay dib u bilaabaan, kadib qabow, heerkul ah 13-15 ° C.
Adeegyada canshuurta ee Ukraine ayaa xannibay bixinta Bacriminta Belarus
Macluumaadka ka socda Adeegga Ganacsiga ee Ukraine tan iyo Diisambar 7, 2018, waxay u baahan yihiin soo saarayaasha Belarusiyaanka ah inay bixiyaan lacag ah qiyaasta 42.96% qiyaasta bacrinta dibedda laga keeno. Shuruudaha Guddiga Canshuuraha ee Gobolka ayaa ah inay bixiyaan waajibaad ka horjoogsanaya daadinta by soo dajiye, iyadoon loo eegin wadanka asalka. Xilligan la joogo, in ka badan 100 gaari oo leh Bacriminta ayaa ku yaalla xudduudaha xuduudaha.
Qaadashada alaabtu mar dambe ma noqon doonto? In Russia, filo codsi cusub oo kala soocaya alaab tayo leh oo been ah
Tan waxaa ku dhawaaqay Ra'iisul-wasaare Ku-xigeen Tatyana Golikova. Si dhakhso ah ayay u ansixiyaan, masuuliyiintu waxay bilaabi doonaan nidaam joogto ah oo kormeer iyo kormeer ah badeecada iyo calaamadaynta. Codsiga waxaa lagu qeexay xaqiiqda ah in ay ku siin doonto iibsadaha macluumaadka la isku halleyn karo ee ku saabsan badeecadda iyo, dabcan, si loo aqoonsado alaab been abuur ah ama tayada liita.
"Xisaabiyaha beeraha": UK, waxay soo bandhigtay codsi lagu xisaabin karo qaddar cad oo ah bacriminta dhulka
Codsiga wuxuu kaa caawinayaa ilaalinta dheelitirka geedi socodka quudinta dhirta, kormeerka gobolka dalagga, wuxuuna soo saaraa talooyin ku saabsan daryeelkooda. Ururka 'Potash Development Association' ayaa dhowaan soo bandhigay codsi la dhaho PK Calculator. Muuqaalkiisa ugu weyni waa farsameynta xisaabinta qiyaasaha potash ama Bacriminta fosfate, iyo sidoo kale ilaalinta isu dheelitirka caadiga ah ee qaybaha muhiimka ah.
"Biyaha ku shaqeeya halkii laga rabi lahaa" ballan-qaadka macdanta ": Badeecadaha Ukraine ee biyaha dhalada ah ayaa khiyaaneeya iibsadaha
Tani waxaa calaamadeynaaya madaxa hore ee Wasaaradda Caafimaadka iyo Cadaadiska ee Ukraine Svyatoslav Protas. Medic ayaa sheegay in biyaha aan iibsanayno, sida macdanta iyo nadiifinta, waxaa laga soo ururiyaa tuubada oo lagu sifeeyaa iyada oo loo marayo warshadaha nadiifinta. Fikraddiisa, dadku waa in ay fahmaan in marka la eego qiyaasaha biyaha dhalooyinka lagu dhaliyo oo la iibiyo noocyo kala duwan, waa wax aad u adag in la qeexo in biyahan ay tahay guga oo hodan ku ah macdanta.
Baradho Marti ah: Shirkadaha Shiineeyska ah ee reer China waxay doonayaan inay koraan baradho on dhinaca Dhexe ee bisha
Cilmi-baadhayaashan, tijaabadani waxay kaa caawinaysaa inaad ogaato: ma suuragal tahay in ay beerta khudradda iyo miraha ku beerto meelaha saldhigga laga dhigo, iyada oo aan loo sii dirin dhulka. Daraasadlaha Labaad ee Change-4, oo laga soo saarey Xichang Cosmodrome ee Shiinaha, ayaa hadda ka shaqeynaya oo keliya in lagu barto dhinaca danbe ee satellite-ka, laakiin sidoo kale barashada dabeecada carrada qorraxda lagu beerayo baradho.
Qorshaha qiimaha deymiska si loo yareeyo kala badh.
Abaabulkaani wuxuu doonayaa inuu soo bandhigo dadka tuulada. Sida laga soo xigtay xogta Xisbiga Ruushka, tallaabooyinkaas oo kale, waxay awood u yeelan doonaan inay kiciyaan horumarinta beeraha waxayna ku noolaadaan tuulooyinka mudnaanta leh oo faa'iido leh. Qorshahan waxaa soo jeediyay madaxweyne kuxigeenka "United Russia" Gennady Kulik.
Dawlad Goboleedka Duma waxay hirgelisay sharci ku saabsan qawaaniinta ururinta miro iyo boqoshaada goobaha kaynta
Sida ku cad dukumiintiga lagu soo bandhigay shirwaynaha guud ee Duma State, biilka ayaa lagu ansixiyay soo ururinta miraha kaynta. Sida laga soo xigtay Xildhibaannada, tani waxay faa'iido u leedahay. Mashruucu wuxuu bixiyaa abuurista shirkado gaar ah, oo markaa, dadku waxay qaadan doonaan miro kulul, boqoshaada iyo lowska oo ay helaan lacag.